ओली र प्रचण्डको साझा दाबी : प्रतिक्रियावादीले सकेनन् ! – mYKantipur
ओली र प्रचण्डको साझा दाबी : प्रतिक्रियावादीले सकेनन् !
३ जेठ काठमाडौं । शुक्रबार बिहानै बल्खुमा नेकपाले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २६ औं स्मृति दिवस मनायो । कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव विष्णु पौडेलले गरे भने अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले मन्तव्य व्यक्त गरे । ओली र प्रचण्डको मन्तव्यमा केही पार्टीगत विषय थियो, केही चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको विषय थियो ।
विसं. ०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा भन्ने ठाउँबाट त्रिशुलीमा जीप खस्दा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठनविभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको अहिले २६ वर्ष बितिसकेको छ । उनीहरुका गाडी चालक अमर लामाको कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ ।
साविकको एमाले र वर्तमान नेकपाले हरेक जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ । यही सिलसिलामा शुक्रबार बल्खुमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको थियो । तर, त्यहाँ बोल्ने नेकपाका नेताहरुले शुक्रबार मदन–आश्रितका योगदानहरुको मात्रै चर्चा गरे, उनीहरुको हत्या भएको हो या दुर्घटना भन्नेबारेमा बोलेनन् । बरु शुक्रबार नै राजधानीमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ सरकारले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए ।
मदन र आश्रितको हत्या भएको थियो या दुर्घटना ? यो विषय अहिलेसम्म अन्योलमै राखिदै आएको छ । तर, उनीहरुका चालक अमर लामाको भने हत्या नै भएकोमा कुनै शंका छैन । विगतमा एमालेले यसको दोष माओवादीलाई लगाउँदै आएको थियो । तर, माओवादीले लामाको हत्यामा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएको छ ।
तथापि शुक्रबार बल्खुको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले हत्या वा दुर्घटनामा प्रवेश नगरिकनै मदन भण्डारीका विषयमा बहस गरे ।
मदन भण्डारीको योगदानका विषयमा प्रचण्डको भनाइको सार यस्तो थियो–
‘हामीले अन्धो भएर पार्टी एकता गरेका हैनौं । हामीले जनताको जनवादलाई तत्कालका लागि र समाजवादलाई रणनीतिका रुपमा… । जनताको जनवादलाई पनि समाजवादउन्मूख जनताको जनवादका रुपमा भनेर जे लिपिवद्ध गरेका छौं, त्यो वैचारिक धरातलमा टेकेर हामी छौं र आउने जिल्ला अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका पनि रचनात्मक र सकारात्मक महान बहसका वीचबाट, विज्ञानको विकास प्रयोगबाट हुन्छ । विज्ञानको विकासका सबैको मेहनतबाट हुन्छ र सही विचार वर्गसंघर्षका अनुभवहरुको संश्लेषणबाट हुन्छ । केपी ओली र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा हामीले भनेका थियौं, हामीले विचारलाई पनि परिमार्जन र विकसित गर्नेछौं । नेपालबाट समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल दिने आँट गर्नेछौं भनेका छौं । हामीले त्यसो गरेनौं र पुरानै कुरा दोहो¥याइराख्यौं भने हामी वैज्ञानिक चाँहि हुन सक्दैनौं ।’
नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन भण्डारीका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिको मुख्य सार यस्तो थियो–
‘जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेको विचारको धारा, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले छोड्दैन । त्यस विचारको धाराबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ । त्यसलाई छोड्नै मिल्दैन । किनभने, जाने कता त्यसपछि ? मुख्य कुरा यो हो । यसबाट अगाडि बढ्ने कुरामा निश्चिन्त भएर हामी अगाडि बढ्छौं । हाम्रो एकताले विचारधारात्मक स्पष्टतालाई सुदृढ गर्दै, खँदिलो बनाउँदै लान्छ ।’
मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादका विषयमा चर्चा गरिसकेपछि ओली र प्रचण्डले पाटीृ एकताको वर्षदिनमा विरोधीहरुको प्रयासलाई असफल पारिएको साझा निश्कर्ष सुनाए । विरोधीहरुले आफूहरुवीच फुट ल्याउने प्रयास गरे पनि नसकेको भन्दै प्रचण्डले नेकपाका नेताहरु विशेष धातुबाट बनेको प्रमाणित भएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यस्तै दाबी गरे । सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले सरकारविरुद्ध प्रचार अभियान चलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिक्रियावादीहरु असफल हुने’ दाबी गरे ।
आधा घण्टा मन्तव्य दिएका प्रधानमन्त्रीले अर्को चुनावमा नेकपाले एक्लै दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरे । उनले लोकतन्त्रमा कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको सम्झाए । नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई कर्तव्य सम्झाउने प्रयास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्वोधन केही अंश अर्थपूर्ण छ, जुन यसप्रकार छ–
प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सहजै पराजय स्वीकार्दैनन् !
हामी एउटा महान अभियानमा छौं, एउटा महान आन्दोलनमा छौं । परिस्थितिहरु चुनौतीपूर्ण छन् । पराजित प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सहजै पराजय स्वीकार्दैनन् । र, त्यस्ता शक्तिहरुले जनताको एकता, जनताको शक्ति, जनताको अभियान, जनताको आन्दोलन, जनताको सफलता ती कुराहरु देख्न रुचाउँदैनन् । त्यसकारण उनीहरु यस स्थितिलाई भत्काउन, बिगार्न लाग्छन् ।
हामीले देखेका छौं सरकार देशको हितको पक्षमा देशभित्र र देशबाहिर काम गरेर नेपलाी अर्थतन्त्रलाई सबल, विकसित कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस काममा सरकार लाग्या छ । तर, प्रचार तपाईले हेर्नुभो भने, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरु हेर्नुभो भने देख्नुहुन्छ ओहो ! …हमला हामीविरुद्ध छ ।
अहिले हाम्रो विरोध गर्ने नाममा समाजलाई अनुशासनहीन, अराजक र असभ्य समाज बनाउने प्रयास गहिरो गरी भैरहेको छ । त्यो कुरासँग हामी सजग छौं । तर, त्यस कुरामा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सफल हुने छैनन् । हाम्रो पार्टी सजग छ, एकतावद्ध छ र अगाडि बढ्छ ।
हाम्रो पार्टी बहुमतका साथ सरकारमा छ, कतिलाई पच्या छैन । अहिले हामीसँग अलिकति दुईतिहाई छैन, नपचेर के गर्ने ? अर्कोपल्ट दुई तिहाईको हुन्छ यो सरकार । एकल दुई तिहाईको हुन्छ । किनभने, यसले देशको पक्षमा काम गर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ । यस पार्टीका नेताहरु धन कमाउन हिँडेका छैनन् । अरु कुनै उद्देश्यका साथ हिँडेका छैनन् ।
म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मैले धेरैपल्ट भनेको छु, मेरो ध्यान प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रष्टाचार आफू नगर्ने, गर्न नदिने देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने रहेको छ । यस सम्बन्धमा म सार्वजनिक ढंगले चुनौति दिएर भन्न चाहन्छु । असभ्यतापूर्वक कोही मुख छाड्नेहरु, त्यस्ताहरु त कहिले–कहिले देखिइआएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, म चुनौतीका साथ भन्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ ।
हाम्रो यो सफलता, सफलताको शिखर हैन, सफलताको प्रारम्भ हो । हामी राष्ट्र निर्माण गरेर सफलताका सिँढीहरु अझ माथि–माथि चढ्दै जान्छौं ।
केही–केही कमीहरु छन्, केही–केही असजिलाहरु छन्, तरु, हामीले ती कुराहरुलाई सच्याउनुपर्छ । यस पार्टीलाई एउटा नमूना पार्टीका रुपमा, अनुशासित पार्टीका रुपमा यस पार्टीलाई विकास गर्नुपर्छ । हामीले आन्तरिक कुरा के हुन्, सार्वजनिक कुरा के हुन्, आवेशका कुरा के हुन्, यथार्थ कुरा के हुन्, ती कुराहरुलाई छुट्याएर अभिव्यक्ति दिने गर्नुपर्छ । आक्रोशमा अनुचित अभिव्यक्ति सार्वजनिक ढंगले दिनु वाञ्छनीय हुँदैन । त्यतापट्टि हाम्रा कमीहरु हामीले सच्याउनुपर्छ । म सबै साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । यसबाटोबाट मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौं । सच्याउने बाटोबाट मात्रै अगाडि जान सक्छौं । अनुशासित पार्टीको बाटोबाट मात्रै अगाडि जान सक्छौं ।
लोकतन्त्र र अराजकता एउटै चिज होइन । अहिले नेपालमा बहस पनि भइराखेको छ । अराजकतालाई लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र, आराजकतालाई स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र राख्न खोज्ने र लोकतन्त्र भनेको एउटा मूल्य, मान्यता, अभ्यास, आचरण मानेको कानूनी शासन हो भन्ने कुरा बुझ्न नचाहने ।
लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन हो । कानूनको उल्लंघन गरेर मनपरि सरकारले गर्न पाउँदैन, सक्दैन । तर, नागरिकका पनि कर्तव्यहरु हुन्छन् । नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, कानूनको पालना गर्नु । संविधानको पालना गर्नु । त्यो लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा नै हो । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नका लागि यो सरकार प्रतिवद्ध छ, किनभने जुन पार्टीले लोकतन्त्रका लागि लडेर यहाँसम्म आएको छ, त्यो पार्टीले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई तलमाथि गर्छ भन्ने ठीक होइन ।
अहिले अनेक प्रकारका निराशा फैलाउने कोशिसहरु भएका छन् । कम्युनिस्टले निराश हुन जान्नुहुँदैन । निराश हुन मान्नु पनि हुँदैन । हामी निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौं । हामी सफलतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं र बढ्नेछौं ।